သောင်းပြောင်းထွေလာ ( Henry Aung ) — HiveHustlers
kachinhenry in HIVE-MYANMAR •2months ago (edited)
#myanmar #knowledge #leo #archon #proofofbrain #aeneas #creativecoin #hivelist #hivehustlers
ကျွန်တော်တို့ ဇာတ်လိုက်ကြီးကလည်း သူများနည်းတူ လိုက်ကျပေးရတယ်ထင်ပဗျာ။ မိုဘိုင်းဒေတာတွေ ဈေးတက်တော့ ဒုက္ခရောက်မှာတော့အမှန် ဟိုက်ပလက်ဖောင်းပေါ် အရင်လို အချိန်ကြာကြာ နေနိုင်ပါ့မလားတောင် စိုးရိမ်မိတယ်။ !LOLZ !PIZZA
Hive က သူ့အလုပ်သူလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်ရုံပါ့။!PIZZA. !LOL
@kachinhenry you can call @lolzbotamaximum of6times per day.
အခုတော့ Mobile Data တတ်တော့မယ်
နောက်ဆို wifi လဲ ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူး မျက်ခုံး ခပ်လှုပ်လှုပ်ရယ်
အဆင်ပြေသလိုပေါ့ ညီရေ...!LOL. !PIZZA
donjaun2months ago
data တင် မဟုတ်ဘူး
wifi ပါ တက်မယ် ပြောနေတယ်ဗျာ
ကိုဟင် မေးကြည့်တာ.. Wifi တွေကို ညွန်ကြားချက် ထွက်မလာသေးဘူးတဲ့
ဒေဝဒတ် က အဖော်တွေနဲ့
ဒင်း အဖော်တွေပါ ကိစ္စတုန်းရမှာ။
အပေါ်က အပိုဒ်မှာ $1 အစား $2 လို့ ပြန်ပြင်ပေးအုံးဗျို့။
kachinhenry2months ago (edited)
ကျေးဇူးပဲ... ပြင်လိုက်ပြီ. !PIZZA
sheinthu2months ago
ဒေဝဒတ်အနား အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးရောက်နေပီလားမသိ😂။!PIZZA
တောင်တွင်း ရှင် ရှင် ဥက္ကဋ္ဌတို့ ရောက်နေစေချင်တာ...!PIZZA. !LOL
Ecencyလဲသူ့အခက်အခဲနဲ့သူမို့ ခွင့်လွှတ်ရသော်လည်း ကြင်စိုးကိုတော့ သူမသေခင်လက်သီးနှင့် တချက်လောက်တော့ ထိုးချင်သေးသည်။ !LOLZ
တချက်တည်းလား.... တော်ပြီလာ..!PIZZA. !LOL.
ကျန်းတာအားမရလို့ လေလိုင်းက အင်တာနက်တောင် လိုက်ရမ်းနေပြီ။
အင်း... ဘုရားလောင်း အမြန်ပေါ်တော်မူပါတော့ဗျို့...
ရှိတဲ့ဘုရား အဆင်ပြေသလို အကုန်ကယ်မှ ဖြစ်မယ်။. !LOL. !PIZZA
ဒေဝဒတ်နဲ့လာတွေ့တဲ့ လူ့သက်တမ်းမှာ လူလာဖြစ်တော့ ပါရမီဖြည့်ဖို့ပဲလို့ မှတ်ယူရတော့မှာပေါ့...!PIZZA
အစ်ကိုလည်း အဲသလိုပဲ တွေးမိတယ်....!PIZZA. !LOL
က 10 ကိုင်ထားလျှင် တစ်ခု မန့်ခေါ်နိုင်ပါသည်။
Update မပြောင်းထားရင် ထိုအတိုင်းသာပေါ့။
အခုလို အသိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။!PIZZA
အာ့လို မန့်လည်း Pizza ကျွေးမှာပဲ...!PIZZA. !LOL.
sayalu2months ago
မိုင်တဲက ဘဝပျက်နေတော့ တယ်လီနော၊ အော်ရီဒူးတို့ကိုပါ သေဖော်ညှိနေတာ ထင်ပါ့။
အဲဒီနည်းနဲ့ နောက်ဆုံး သုံးချင်သုံးမသုံးချင်နေ ... မိုင်တဲ ပဲ သုံး ဆိုတဲ့ အဆင့်ရောက်လာမလားပဲ...!PIZZA. !LOL. !LUV
@kachinhenry(1/1) gave you | wallet | market | tools | connect | <><
@sayalu, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
ဟုတ်ပါ့။ boosting valueတွေလျော့လို့ သတိထားမိနေတာ။
ဒါပေသိ... စာရေးတော့ မပျက်စေနဲ့ ... ကိုယ်တွေမှာ စာရေးအားပဲရှိတာ...!PIZZA. !LOL
ဟုတ်။ အာ့ကြောင့် တသ်နေ့တစ်ပုဒ်ဖျစ်ညှစ်ပြီးရေးနေရတာ။
kachinhenry tipped golden.future (x1)
@kachinhenry(10/18) tipped @naythan (x1)